Madaxweyne Obama oo shaaciyey in ay Israel kala shaqaynayaan waajihidda Iran – Radio Daljir
Washington,Feb 6 -Madaxweynaha dalka Maraykanka Brack Obama ayaa waraysi uu siiiyey maxadada layska arko ee NBC ku sheegay in ay si dhow kala shaqaynayaan dowladda Israel sidii Iran looga hor istaagilahaa in ay noqoto quwad Nukleer ah.
Mr Obama ayaa sheegay in uu rumaysanyahay in Israel aanay weli go?aansan sidii ay u waajihilahyd arinta dalka Iran ,inkastoo ay soo baxayaan warbixino sheegaya in laga yaabo in Israel ay duqaymo dhinaca cirka ah u geysato xarumaha Nukleerka ee Iran xilliga guga ah ee soo socda.
Madaxweynaha maraykanka ayaa waraysigiisa NBC ku sheegay in ujeedada ugu weyn ay tahay in xasaradan si diblamaasiyadeed loo xaliyo ,lakiin waxa uu tilmaamay in wax walba ay miiska saaranyihiin.
Maraykanka iyo Israel ayaa shaki ka qaba in Iran ay dhisayso qunbulad Nukleer ah ,laakiin Tehran ayaa ku dooda in barnaamijkeeda Nukleerku uu yahay mid nabadeed oo laga leeyahay dano dhinaca rayidka ah.
Bishii November ee sanadkii waakaalada qaramada midoobey ula socota Nukleerka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan IAEA ayaa sheegtay in ay hayaan macluumaad ku saabsan in Iran ay samaysay tijaabooin ku aadan horumarka aaladaha nukleerka ee wax qarxiya.
Wixii intaa ka dameeyey maraykanka iyo Midowga Europe ayaa Tehran ku soo rogay xayiraado ka dhan ah wax soo saarka shidaalka iyo baanka dhexe ee dalkaasi ,iyadoo tallaabooyinkaasi looga golahaa sidii bal loogu cadaadinlahaa in ay faraha kala baxdo barnaamijkeeda Nukleerka.
” waxaan ahaa qof cad,waxaana la doonayey in la sameeyo wax kasta ee lagaga hortegayo in Iran ay gacanta ku dhigto hub nukleer ah ,kaasi oo tartan hubka nukleerka ah gelinaya gobolakaasi bariga dhexe ee aan deganayn ama nugul ? sidaasi ayuu madaxweyne Obama ku sheegay waraysiga uu siiyey televisionka NBC Axadii shalaytoole.